अनुपाले कुमारकाे साथ भाग्नुकाे खुल्यो यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अनुपाले कुमारकाे साथ भाग्नुकाे खुल्यो यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित)
कुमार कार्कीसंग भागेर भारतको केरला पुगेकी अनुपाले आफु घर छोडेर हिड्नको कारण बताएकी छन् । उनले आफु बाध्यताले हिड्नु परेको बताएकी छन् । उनले आफु कुमारसंग जान लागेको भनेर पहिले नै आफ्ना श्रीमानलाई भनेको समेत मिडिया सामु खोलेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा कुमारसंग चिनजान भएको र उनीसंग बोलचाल भएको भने अनुपा र कुमारले स्वीकार गरेका छन् ।
तर आफुहरुको नराम्रो सम्बन्ध नहुँदा पनि कुमारको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानसंग लागि भनेर वे’इज्ज’त गरेर सबैलाई फोन गरेर भनेका कारण बाध्य भएर आफु हिडेको उनले बताएकी हुन् । उनीहरु नहिड्दै कुमारको श्रीमतीले फेसवुकमा दुवैजनाको तस्बिर राखेर यिनीहरु भागे भनेर हल्ला म’च्चाएको अनुपाको भनाई छ । कुमारको श्रीमतीले नै आफ्नो श्रीमानलाई कुरा लगाएपछि श्रीमानले आफुलाई या”तना दिन थालेको अनुपाको भनाई छ ।
कुमारको श्रीमतीले अब तिमीहरु नबोल भनेर भनेका कारण आफुहरु बोल्न समेत छोडिसक्दा पनि बे”इ”ज्जत गर्न नछोडेका कारण आफु बाध्य भएर हिड्न परेको अनुपाको भनाई छ । उनले श्रीमानले नेपाल आएर तेरो ज्या”’न लिन्छु भन्दै ध”’म्क्या”’उने र उता कुमारलाई पनि ध”म्क्या”’उने गर्न थालेका थिए । अनुपाको श्रीमानले ध”’म्की दिएका कारण नेपाल गएर आफु सुरक्षित हुन्छु जस्तो नलागेका कारण कसैलाई खबर नगरेको कुमारको भनाई छ ।
नेपाल आएपछि काठमाडौंमा अनुपा भेट्न पुगेकी थिइन् । विदेशवाट श्रीमानले र नेपालमा कुमारको श्रीमतीले ध””म्की दिने र आफन्त जति सबैलाई फोन गरेर बे”’इ”’ज्जत गरेपछि आफु बस्न नसकेको अनुपाको भनाई छ । एकातिर बे”’इ”ज्जत भयो भने अर्कातिर ज्या””न पनि असुरक्षित भएपछि कुमारलाई अब मलाई जसरी पनि लैजाउ नत्र म झु”’ण्डि”एर देह त्याग गर्छु भनेर अनुपाले भनेकी थिइन् । अनुपाको त्यस्तो भनाई पछि कुमार केरला जान राजी भएका थिए ।
केरालामा आफुले तिहारमा टिका लगाएर भाई मानेका एक जनाको घरमा अनुपाले कुमारलाई पनि लिएर गएकी थिइन् । आफुहरु कात्तिक १ गते मात्र हिडेको भएपनि कुमारको श्रीमतीले असोजको अन्तिम सातानै फेसवुकमा दुई जनाको तस्बिर राखेर बे”’इ”’ज्जत गरेको अनुपाको भनाई छ । कुमारलाई गएको माघ देखि मात्र चिनजान भएको अनुपाको भनाई छ ।
सलाम छ साहासिक महिला बस चालकलाई: हेर्नुहोस उनकाे सुखदु:खका कुरा!